Yaa la iska Ilaaliyaa, Yaase la isku Ilaaliyaa ? | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Yaa la iska Ilaaliyaa, Yaase la isku Ilaaliyaa ?
April 5, 2012 – Hordhac ahaan waxaan idin xusuusinayaa in ereyga ammaan ama nabdgelyo uusan aheyn wax si sahlan lagu helo amaba lagu hanto. Sugidda ammaanka waxaa lagu qeexaa kala fogeynta waxa la ilaalinayo iyo khatarta ay suurtogal tahay iney ku timaado hadafkaas. Ammaan waxaa ku shaqo leh maamulayaal ama siyaasiyiin, khubaro, sirdoon iyo ciidan.
Mowduuca dulucdiisa inta aanan u daadegin aan isla fahamano ereyga Ammaan oo afka ingiriiska lagu yiraa Security waa noocyo badanyahay, balse midda aan anigu manta rabo inaan si gaar ah wax uga taabto waxa ey tahay nabadgelyada madaxda, shacabka (naftooda iyo hantidfooda) iyo goobaha muhiinka ah.
Sugidda ammaanka waxaa qorsheheeda dejiya siyaasiyiin la kaashada khubaro ku takhasusay cilmiga ammaanka. Intaas ka dibna waxey siyaasiyiintu u raadsdaan sharci ansixiya fulinta howlaha ammaanka ka gadaalna u sameysta ciidammo loo tababaray loona qalabeeyay sugidda ammaanka. Haddii ay ka soo dhalaalaan howshaas muhiimka ahna hanta taagerada dadkooda. Qof kastaa nolosha heerkuu doono ha ka joogee ammaan ayow u baahanyahay.
Soomaalida Maantu Maxey Ammaan u taqaannaa ?
Sidii dagaallada sokeeye uga dhaceen Dalka kuwaasoo ka soo kala billowday qeybaha kala duwan ee dalka waqtiyo kala geddisan, waxaa caado noqotay in sugid ammaan loo qaato iney tahay ciidammo tiro badan oo aad u hubeysan watana baabuurta teknikada ah oo marba dhinac u yaaca ayagoon wax xog iyo xaal ah toona heynin. Waxaa kaloo loo qaatay iney tahay isbaarooyin tiro beel ah oo macnaha ugu weyn ee ay miliishiyaadku u joogaan ay tahay baad iney ka qaataan dadka iyo gaadiidka isticmaala waddadaas. Waxaa loo qaatay iney tahay miliishiyaad joogto ugu hor qayila guryaha iyo xafiisyada madaxda, ganacsatada iyo xubnaha bulshada ee magaca leh. Waxaa loo qaatay iney tahay wax kasta oo aad uga fog sidii loogu talo galay. Kuma labbisna uniform isu wada eg, tiradooda saxda ah cid taqaanna ma jirto xataa ha ahaato cidii la ilaalinaayey, ma lahan dishibiliin iyo kala dambeyn, ma yaqaanaan sida loo isticmaalo amaba ma heystaan isgaarsiinta raadyaha oo mideysan, taliyohooda ayaga lagama yaqaano oo markey doonaan amarkiisa ma qaataan, waqtigey rabaan ayey seexdaan, baxaan ama soo laabtaan. Inta badan waxey cayaarayaan turub, dubnad, shax iwm, badanaa waa wada qayilaan, saacadaha dambe ee habeenkiina waa xilliga cadowgu ugu jecelyahay howlgallada gaadmada ahe waxey u badantahay iney kulligood hurdaan.
Natiijada ka soo baxday waxey noqotay in ciddii doonta iney wax yeesho mas’uulkii ama meeshii la ilaalinayey ey si sahlan uga faa’iideysato dabacsanaantaas iyo kala daadsnataas aan la soo koobi Karin.
Maxaan ka dhaxalnay
Waxaan marar badan maqlnaa ciidammo ka wada tirsan……oo isku rasaaseeyay meel hebla. Waa wax aan la aqbali Karin soo noqnoqoshada dhacdooyinka noocaas ah. Ciidmmada dhabta ah haddey mar ku kacaan taasoo kale, waxaa la marsiiyaa ciqaab iyo xukun militari ama boliis ooy suurto gal tahay dil toogasho in lagu xukumo kuwii ku lugta lahaa.
Waxaad mar kasta maqshaa askari ka tirsan ilaalada (meel ama mas’uul) oo toogasho ku dilay qof rayad ah wax talaabo ah oo laga qaadaana ey yartahay amaba eysan jirin.
Waxey cuntada ka cunaan bac tobanaan jeer horay loo isticmaalay qaarna dhulka ayeyba ku daadsadaan oo ay ka markaas kadib cunaan. Waxey intooda bada seexdaan dhulka ayagoo gashan dharkii ey maantoo dhan ku shaqeynayeen, waana yartahay iney dharka iska dhaqaan
Waxey shaxaad nafta uga qaadaan dadka la shaqeeya ama soo booqda mas’uulka ay ilaalinayaan ama dadka ka shaqeeya goobta loo xil saaray iney ammaankeeda sugaan. Qofkii shaxaad siiyana waxow si sahlan ugu gudbaa gudaha baaritaan la’aan iyo ayadoo aan la sii wargelinin mas’uulkii gudaha ku jiray oo laga yaabo in owsan diyaar u aheyn inow la kulmo ruuxaas. Tan ugu khatarta badanina waxey tahay in qofkii shaxaad kadib la sii daayey uu damacsanyahay inow isku qarxiyo, dilo ama dhibaato kale u geysto mas’uulkii la ilaalinaayey.
Mar kasta oo mushaarkooda la siiyo, waxaa iridda ay ilaalada ka hayaan yimaada qaad waleyaal ay si joogto ah deyn uga qaadanayeen bil dhan amaba ka badan markaasaa waxaa halkaas ka dhaca buuq iyo is qabqabsi, mararka qaarna waxaaba is rasaaseeya miliishayada qaad walaha iyo ilaaldii goobtaas.
Waxaan maqli jirey waayadii dhexe ee taariikhda, dalkii bad leh xuduuddiisa badeed waxey ku ekeyd inta madfaciisu gaari karo, hadda waxaan dhihi karaa waxaa isu heysta in ammaankiisu suganyahay nankii heysta tobaneeyo noocaas aan jid iyo jaha laheyn ah oo naftoodana dhib ku haaya ummaddana nafta u keenay. Balse taasi waa khiyaali oo waxaaba suurto gal ah marar bandanna dhacday iney isla ayagii ilaalinaayey ay dilaan madaxdii.
Xaaladda Maanta Taagan
Tiro koob sax ah ma haayo, balse dib aan ugu noqonnee meeqa mas’uul (heer dowlad Dhexe ama Dowlad Goboleed), ganacsato iyo wax garad kale ayaa ku baxay gacanta dambiileyaal ay u fududeysay habcsanaanta kuwa aan u naqaanno ciidanka ilaalada. Amaba meeqaa ku baxday gacanta isla kuwii ilaalinaayey.
Waxaan ka cudur daaranayaa inaanan tusaaleyaal u soo qaadan dhacdooyin aan wada xusuusannahay maadaama aanan rabin iney qormadeyda ka dhex muuqato inaan si gaar ah uga hadlaayo maamul ama mas’uul gaar ah sababtoo ah waxaa caado noqotay qofkii wax sheega ama qora in eedeyntiisa loo soo kala dheereeyo.
Intaani waxey iga tahay aragtideyda kooban inaan bal soo ban dhigo madashuna wey u furantahay cid kasta oo wax ku soo kordhin karta mowduucaan. Waxaan codsanayaa inaan loo qaadan inaan rabo inaan ka hadlo cilldaha jira kaliya, balse sida markaan ka fara xalanno oon isla garanno waxa qaldan iyo meesha ay arrintu la’dahay ayaan u qalin qaadan doonnaa xal u helisteeda inaan intii karaankeenna ah soo jeedinno. In la qaato iyo in kale go’aankeeda cid kalaan u deynayaa.
Cabdiweli Gaas: Nuur Cadde Darawal baan ku Badalay! // – Bahnimo iyo Beelnimo! Siyaasada Soomaalida